Pep Guardiola oo kula dagaalamaya kooxda Roma saxiixa xiddig ka ciyaara horyaalka… – Gool FM
(Manchester) 16 Sebt 2020. Tababaraha reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa kula tartamaya naadiga Roma saxiiixa xiddig ka tirsan Shakhtar Donetsk ee Manor Solomon, si uu ula saxiixdo inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Shabakada “Calciomercato” ayaa shaaca ka qaaday in Pep Guardiola uu doonayo saxiixa 21 jirka kooxda reer Ukraine ee Shakhtar Donetsk, xilli Roma ay isku diyaarineyso inay ka gudbiso dalab gaaraya 12 million euro, si ay u hesho saxiixa ciyaaryahanka.
Kooxda reer Ukraine ayaa codsatay ugu yaraan 25 million euro si taas badelkeeda ay ugu fasaxdo adeega ciyaaryahanka Roma, Manchester City ama koox kale.
Kooxaha waa weyn ee Yurub oo dhan ayaa wada xiiseynaya inay gacanta ku dhigaan saxiixa Manor Solomon, inkastoo ay shabakada “Calciomercato” xustay lacagta ay dooneyso kooxda Roma inay bixiso, hadana ma aysan ka hadlin qiimaha dhaqaale ay dooneyso City inay ku bixiso heshiiskan.
Si kastaba ha ahaatee, Manor Solomon ayaa dhaliyay 6 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 5 gool kale, kaddib 29 kulan uu ku ciyaaray maaliyada kooxda Shakhtar Donetsk xilli ciyaareedkii hore, wuxuuna ciyaaray labadii kulan ay Man City ku wada ciyaareen wareega group-yada ee Champions League.